“Ousmane Dembele Wuxuu heystaa waxyaabo aysan heysan Ciyaartoyda kale.”. – Gool FM
“Ousmane Dembele Wuxuu heystaa waxyaabo aysan heysan Ciyaartoyda kale.”.
(Spain) 25 Nof 2018. Barcelona ayaa bar baro waqti dambe ah ka heshay Atletico Madrid ciyaartii xalay waxaana midaa looga mahdinayaa da’yarkooda Ousmane Dembele, Tababare Valverde ayaana amaan ugu qubeeyay weeraryahankiisa xalay ka fujiyay.
Dhaliyaha reer France ayaa usbuucyadii dhawaa lagu heystay dhibaato dhanka Akhlaaqda ah, balse kaddib markii uu badel soo daahay ku soo galay ciyaartii xalay ayuu kooxda u dhaliyay gool aad u muhiim ah.
“Waa run inuu ahaa mid muhiim ah,” Valverde ayaa sidaa yiri ciyaarta kaddib.
“Waa run inuu joogteenayo bandhigiisa maxaa yeelay wuxuu ciyaaray inbadan, koox sidan oo kalana waxaad u baahan tahay wax kasta.
“Dembele wuxuu leeyahay waxyaabo aysan lahayn ciyaartoyda kale, kalsooni uu ku qabo nafsadiisa, inuu labada lug ku laado kubbada, shaqsiyad iyo waliba xirfad.
“Dad badan ayaa had iyo jeer hadal haya isaga, wuxuuna innaga nasiiyaa waxyaabo badan.”.
Manchester United oo u dhaqaaqeysa saxiixa xidig muhiim ka ah horyaalka Premier League